काठमाडौं, १९ मंसीर । सूर्य आदि नवग्रहमध्ये सबभन्दा ढिलो गति भएको ग्रह शनिले राशि परिवर्तन गर्दैछ । औसतमा अढाई वर्ष एक राशिमा रहने शनि धनु राशिबाट आफ्नै स्वराशि मकर राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसको विभिन्न राशिलाई भिन्न भिन्न असर पर्नेछ ।
शनि ग्रहको राशि परिवर्तनको मितिमा भने फरक फरक सिद्धान्तको प्रयोगका कारण केही फरक देखिन्छ । दृक सिद्धान्तबाट गणना गर्नेहरुले सन् २०२० जनवरी २४ अर्थात् २०७६ माघ १० मा मकर राशिमा प्रवेश गर्ने बताएका छन् भने सूर्य सिद्धान्तबाट गणना गर्नेहरुले भने २०७६ फागुन ४ गतेदेखि शनिको राशि परिवर्तन हुने उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आधिकारिकता प्रदान गर्ने पञ्चाङ्गहरु सबै सूर्य सिद्धान्तबाट गणना हुन्छन् । केहीले भने दृक सिद्धान्तअनुसारको गणना सही हुने पनि बताउने गरेका छन् । ज्योतिष क्षेत्रमा गणना सिद्धान्तका बारेमा मतभेद धेरै समयदेखि रहँदै आएको छ ।
साढेसाती, अढैया यही शनिको गोचरले निर्धारण हुन्छ । आफ्नो जन्म राशिबाट १२औं स्थानमा शनिले गोचर गर्दा साढेसाती सुरु हुन्छ । जन्म राशिमा शनि रहँदा साढेसातीको मध्य चरण हुन्छ र जन्मराशिबाट दोस्रो स्थानमा शनि रहँदा साढेसातीको अन्त्य चरण हुन्छ ।
यसअनुसार शनि मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि कुम्भ राशिलाई शनिको साढेसाती शुरु हुन्छ । मकर राशिका व्यक्तिहरुलाई मध्य चरणको साढेसाती चल्छ । धनु राशिका लागि साढेसाती अन्त्य चरणमा प्रवेश गर्छ । वृश्चिक राशिहरुको भने शनि मकरमा प्रवेश गरेपछि शनिको साढेसाती सकिन्छ ।
जन्म राशिबाट चतुर्थ स्थानमा शनि हुँदा र अष्टम स्थानमा शनि हुँदा शनिको अढैया हुन्छ । अहिले शनि धनु राशिमा हुँदा वृष राशि र कन्या राशिलाई अढैया छ । अब शनि मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि वृष राशि र कन्या राशिलाई अढैया सकिन्छ । शनि मकर राशिमा हुँदा मिथुन राशि र तुला राशिलाई अढैया दशा चल्छ ।
जन्म राशिबाट तेस्रो, छैटौं र एघारौं स्थानमा शनिको गोचर हुँदा शनिको शुभफल प्राप्त हुन्छ । जसअनुसार शनि मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि वृश्चिक राशि, सिंह राशि र मीन राशिका व्यक्तिहरुलाई शनिको गोचरको शुभफल प्राप्त हुन्छ ।
शनि ग्रहको पौराणिक सन्दर्भ
शनि ग्रहलाई ग्रहसभाको न्यायाधीशको रुपमा लिइन्छ । पौराणिक प्रसंगहरुमा पृथ्वीमा पाप र धर्मलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि शनिको जन्म गराइएको कथा छ । शिवजीकै अंगको रुपमा शनिलाई लिइन्छ । सूर्यको पुत्रका रुपमा छायाबाट शनिको जन्म हुन्छ । तर प्रकाशवान सूर्यले कालो वर्ण भएका शनिलाई पुत्रका रुपमा अस्वीकार गर्छन् । त्यसपछि शनिको बाल्यकाल अन्धकारमा वित्छ । पछि शिवजीले सूर्यलाई शनिको जन्मको खास कारण बताएपछि सूर्यले शनिलाई स्वीकार गरेको प्रसंग पनि छ । पौराणिक कथामा शनिको जीवनकाल उतारचढावपूर्ण हुन्छ । पछि उनलाई आफ्नो जन्मको खास कारणबारे वोध भएपछि उनले वैराग्यको बाटो लिन्छन् । शनिलाई पृथ्वीमा पाप र पुण्यको हिसाबकिताब राख्ने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने जिम्मा दिइएको छ । सूर्यको एक चक्कर लगाउन शनि ग्रहलाई करिव ३० वर्ष लाग्छ । नौ ग्रहमध्ये शनि सबै भन्दा ढिलो चाल भएको ग्रह हो ।
के हुन्छ साढेसाती र अढैयामा ?
शनिको साढेसाती र अढैयामा अनेकन बाधा, व्यवधान, उल्झनको सामना गर्नुपर्ने, मानसिक तनाव व्यहोर्नुपर्ने, आफ्नैबाट असहयोग हुने, सहयोगीहरुले पनि नगन्ने, आर्थिक स्थिति डामाडोल हुने, घरभित्रै पनि आफ्ना लागि प्रतिकूल वातावरण बन्ने आदि अवस्था आउँछ । आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्न थालेपछि विस्तारै वरिपरिका मानिसहरुले साथ छोड्ने, समस्यामा पर्न थालेपछि घरपरिवारका अन्य सदस्यबाट पनि असहयोग हुने, आफन्तबाट पनि टाढिँदै जाने, हौसला र प्रेरणा दिने भन्दा हेयको दृष्टिले हेर्नेहरु बढी हुने, राम्रो नै कुरा गर्दा पनि कसैले नमान्ने जस्तो स्थिति पनि बन्छ । यही अवधिमा आफन्त र वरिपरिका व्यक्तिहरुको असली अनुहार पनि देखिने बताइन्छ । जन्म कुण्डलीमा शनिको स्थिति कमजोर भएमा यसको मात्रामा वृद्धि हुन्छ भने शनिको स्थिति बलियो भएमा कम हुन्छ ।
शनिले अनेकन समस्या र उल्झनहरुमार्फत मानिसलाई धन के हो ?, सम्बन्धहरु के मा अडिएका हुन्छन् ?, खास जीवन के हो ? जस्ता अनेकन कुराको पाठ सिकाउँछ । साढेसातीको प्रथम चरणमा मानिसको सन्तुलन विग्रन थाल्छ । समस्याहरुको सुरुवात हुन्छ । मध्य चरणमा भुंग्रोमा परेजस्तो स्थिति बनाउँछ । अन्तिम चरणमा मानिसले अनेकन कुराहरुको वोध गर्छ । वैराग्यको कारक ग्रह पनि शनि भएकोले शनिले वैराग्य भावनाको जागृती पनि गराउँछ । यही अवधिमा व्यक्तिले अति मोह गर्ने चीजबाट वा अति प्रिय चीजबाट उसलाई टाढा लैजाने वा विछोड गराउने पनि हुन्छ । कसैले विगतमा गरेका अन्यायकारी काम जुन गुपचुप स्थितिमा छ त्यसको पोल यही अवधिमा खुल्न पनि सक्छ । एकाएक शक्ति, प्राधिकार आदि खोसिने पनि हुन सक्छ । मानिसलाई अनेकन हिसाबले पाठ पढाउने काम शनिले गर्ने वैदिक ज्योतिषका ग्रन्थहरुमा उल्लेख छन् ।
साढेसाती र अढैयाको प्रभाव जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थितिले पनि निर्धारण गर्छ । शनिको स्थिति शुभ भएमा प्रभाव कम पर्छ । त्यसैगरी ग्रहहरुमध्ये ढिलो गति भएको अर्को ग्रह वृहस्पति हो । वृहस्पतिको करिव एक वर्षमा राशि परिवर्तन हुन्छ । यदि गोचरमा वृहस्पतिको गोचर शुभ छ भने साढेसातीको प्रभाव त्यो अवधिमा केही कम हुन्छ । त्यस्तै गोचरमा वेधको नियम पनि छ । शनिको साढेसाती र अढैया चलिरहँदा कुनै ग्रहले वेध गरेको छ भने त्यस समयमा पनि नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छ । साथसाथै विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा लगायत विभिन्न दशा पद्धतिहरु पनि छन् । दशा शुभ दशा चलिरहेको छ भने त्यो दशाको शुभफल पनि प्राप्त हुन्छ । साढेसातीको प्रभावले केही संघर्ष भने बढाउन सक्छ, अनावश्यक झन्झट बढी हुन सक्छ ।
त्यसैले साढेसाती र अढैया चल्यो भन्नेवित्तिकै आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन । कुण्डलीको स्थिति, अरु ग्रहहरुको गोचरको स्थिति, विंशोत्तरी, योगिनी लगायतका दशाको स्थिति लगायत विविध पक्ष विचार गर्नुपर्छ । सबै स्थिति बिग्रिएको अवस्थामा साढेसाती र अढैयाको नकारात्मक प्रभाव अधिक पर्छ । अरु सबै पक्ष शुभ छन् भने साढेसाती र अढैयाको नकारात्मक प्रभावमा केही कमी आउँछ ।
शनिको साढेसाती र अढैयाको प्रभाव सबै व्यक्तिमा एउटै प्रकृतिको हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर शनिले केही न केही पाठ भने यस अवधिमा सिकाउने र शनिको पाठ सिकाउने तरिका केही कष्टदायी हुने ज्योतिषशास्त्रका ग्रन्थहरुमा उल्लेख छन् । सांसारिकताबाट पर पुगेका, आध्यात्मिक व्यक्तिहरु, योगी, ध्यानीहरुमा शनिको नकारात्मक प्रभाव कम हुने पनि बताइन्छ ।
मानिसको उमेरका हिसाबले पनि साढेसाती र अढैयाको प्रभाव फरक हुन्छ । बाल्यकालमा साढेसाती, अढैया चल्दा शारीरिक कष्ट हुने, स्वास्थ्यमा समस्या आउने, कुनै हिसाबले मानसिक पीडा हुने आदि हुन सक्छ ।
शनिको राशि परिवर्तनclose